“मंकीपक्स भाइरस” विश्वभर फैलिदै - सारा खबर
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदै विश्वमा “मंकीपक्स” नामक अर्को भाइरसको बढ्दो संक्रमणले धेरैको ध्यान तानेको छ । पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकामा देखिएको ‘मंकीपक्स भाइरस’ बेलायत, युरोप र अमेरिकाका १२ देशमा पुगिसकेको छ ।
पछिल्लो समय देखिएको मंकीपक्स भाइरस विश्वव्यापी लहरकै रुपमा देखापरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा। शेरबहादुर पुन बताउँछन् । संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमै नभएकाहरूमा पनि देखिएकाले यसको संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने चिन्ताको बिषय बनेको डा। पुनको भनाइ छ ।
अहिले मंकीपक्स देखिरहेको देशमा भाइरसको स्वरुप परिवर्तन भएकाले महामारीका रुपमा फैलनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा। प्रभात अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार यो भाइरसका दुई प्रकार पहिचान भएका छन् । एक, मध्य अफ्रिकाको एउटा भेरियन्ट जसले रोगको बढी लक्षण देखाउँछ, र पश्चिम अफ्रिकामा पाइने अर्को भेरियन्ट जसले हल्का लक्षण मात्रै देखाउँछ ।
‘मध्य अफ्रिकाको भेरियन्टले १० प्रतिशत र पश्चिम अफ्रिकामा पाइने भरियन्टले २ देखि ३ प्रतिशत मृत्यु गराउने पाइन्छ’, डा। अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मध्य अफ्रिकाको भेरियन्टले कोरोना भन्दा तीन गुणा बढी मृत्यु गराउँछ ।’
तर, अहिले फैलिएको भेरियन्ट पश्चिम अफ्रिकामा पाइने भेरियन्ट (कम घातक) चाहिँ हो । ‘यो भाइरस सामान्यता मानिसमा खुल्ला छाला र थुकको छिटाबाट सर्ने देखिएको छ । तर, युरोपतिरका केशहरु हेर्दा कहाँबाट स¥यो भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन । भाइरसले सर्ने स्वरुप परिर्वतन गरेको हो कि भन्ने डर भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
डा। पुन लामो समयसम्म मंकीपक्सका कारण घाउको दाग रहने हुँदा समाजिक विभेद भोग्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो समय हवाइ यातायातको सहज पहुँचले गर्दा युरोपका देशमा बढिरहेको उक्त भाइरस आगामी दिनहरुमा नेपालमा पनि नआउला भन्न नसकिने जनस्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् । संक्रमण पुष्टि भएका देशबाट मानिसहरू आउजाउ गरिरहने भएकाले नेपालमा सतर्कका आवश्यकता भएको डा। पुनले बताए ।
अहिलेसम्म नेपालमा उक्त भाइरसको संक्रमणको शंका नगरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा। चुमनलाल दास बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मानिसबाट मानिसमा सरेको पाइएको छैन । तर, कपडाहरूबाट सर्छ भनिएको छ । नेपालमा हालसम्म देखिएको छैन । सरुवा रोग भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा हामी जानकार छौं,’ डा. दासले भने ।
मंकीपक्सको अहिलेसम्म कुनै उपचार छैन । तर, संक्रमणको रोकथाम र प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । मंकीपक्स भाइरसको विरुद्ध बिफरको खोप प्रभावकारी हुने डा। अधिकारी बताउँछन् । मंकीपक्स भाइरसको विरुद्ध इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता) नभएका कारण संक्रमण फैलिने डर भएको उनको तर्क छ । समाचार संस्था बिबिसीले बिफर र मंकीपक्को भाइरसमा निकै समानता रहेको र बिफर विरुद्धको खोपले ८५ प्रतिशत सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ ।
‘बालबालिका लागि दिइने बिफरको खोप धेरै समय पहिला नै उन्मूलन भएकाले बन्द गरिएको थियो । जसले मंकीपक्स भाइरस र बिफरबाट नै जोगाउथ्यो’, डा। अधिकारीले भने, ‘अहिले बिफरको खोप नलाएकाले संसारभरका मानिस मंकीपक्स भाइरसबाट संक्रमित हुने देखिन्छ ।’
शरीरमा बिबिराहरु आउने हुँदा मंकीपक्स वा ठेउला के हो भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुने डा। पुन बताउँछन् । यदि कोही व्यक्तिमा शरीरमा बिबिराहरु देखिएका छन्, संक्रमण फैलिरहेको देशबाट फर्किएको हो र शरीरमा बिबिराहरु देखिएको छ भने शंकाको घेरामा राख्नुपर्छ । थप प्रयोगशालामा परीक्षणमा पठाउनुपर्छ,’ डा. पुनले भने ।
अघिल्लो लेखमाबालेन्द्र शाहको अग्रता कायम, स्थापति भयो तेस्रो स्थानमा
अर्को लेखमाअति उपभोगवादले जन्माएको गैरकानुनी यौनबजार ,बलात्कार र नेपाली समाज